Faah-faahin cusub weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Saldhiga Ciidanka Awdheegle & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Faah-faahin cusub weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Saldhiga Ciidanka Awdheegle & Wararkii ugu dambeeyay
Awdheegle (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxeysa Khasaaraha ka dhashay dagaal Ciidamada dowladda iyo Maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ku dhexmaray Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabellaha hoose.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalkan uu yimid, ka gadaal markii Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen Saldhiga Ciidamada dowladda ee Degmada Awdheegle ay ku leeyihiin.
Sidoo kale, wararka ayaa tilmaamaya, in dagaalkan uu ahaa mid aad u culus, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay.
Dagaalkan ayaa la xaqiijiyay in laba ruux oo ka mid ahaa dhinacyadii dagaalamay ay halkaasi ku dhinteen, sidoo kale tiro kalena uu dhaawac soo gaaraya.
Si kastaba, saraakiisha Ciidamada dowladda waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen weerarka kaga yimid maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
XOG + DHAGEYSO: Taliyihii watay ciidamadii weeraray caawa xarunta Barlamaanka Puntland oo ka hadlay khasaarihii & wixii dhacay.
DEG DEG: Israsaaseyn xooggan oo Caawa ka dhacday Garoowe, & Xiisad iyo cabsi ka taagan magaalada + Khasaare
XASAASI + AKHRI: Madaxweynaha Somaliland oo kala eryay Wakiiladii ugu badnaa Abid (Ogow Ujeedka ka dambeeya)? + War-saxaafadeed
XOG XASAASI: Maxaa ka jira in ciidamo Jubbaland ka goostay ay isku dhiibeen Militariga Soomaaliya?
XOG: Waa goormee xilliga ay DF Soomaaliya qorsheysay inay bixiso shaatiga Shidaalka?
UPDATE: Maxaa ka jira in uu hirgalay heshiiskii ay wada-gaareen Puntland iyo Imaaraadka Carabta? +XOG SUGAN
Al Shabaab weerar ku qaaday
Saldhiga ciidanka Awdheegle